Majiro Hoteel Caadiga ah: St. Regis wuxuu Xal Cusub siinayaa Dhibaatada Bulshada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hoteelada & Dalxiisyada » Majiro Hoteel Caadiga ah: St. Regis wuxuu Xal Cusub siinayaa Dhibaatada Bulshada
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Ogeysiisyada Saxaafadda • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Sanadkii 1904, Korneyl John Jacob Astor ayaa dhulka u jaray dhismaha St. Regis Hotel oo ku yaal geeska Fifth Avenue iyo 55th Street qaybta ugu khaaska ah ee New York xilligaas.
Naqshadayaashu waxay ahaayeen Trowbridge iyo Livingston oo fadhigoodu ahaa New York.
Shuraakada shirkadu waxay ahaayeen Samuel Beck Parkman Trowbridge (1862-1925) iyo Goodhue Livingston (1867-1951).
Trowbridge wuxuu wax ku bartay Trinity College ee Hartford, Connecticut. Markii uu qalin-jabiyay 1883-kii, wuxuu dhigtey Jaamacadda Columbia ka dibna wuxuu dibedda ku bartay Dugsiga Ameerika ee Daraasaadka Qadiimiga ah ee Athens iyo Ecole des Beaux-Arts ee Paris.
Markii uu ku laabtay New York, wuxuu u shaqeeyay naqshadeeyaha George B. Post. Goodhue Livingston, oo ka soo jeeda qoys caan ku ah gumeysiga New York, wuxuu ka qaatay Jaamacadda Columbia shahaadada koowaad ee jaamacadda. Sannadkii 1894, Trowbridge, Livingston iyo Stockton B. Colt waxay sameeyeen iskaashi socday ilaa 1897 markii Colt baxay. Shirkaddu waxay naqshadeysay dhowr dhisme oo dadweyne iyo ganacsi oo caan ah oo ku yaal Magaalada New York. Ka sokow St. Regis Hotel, kuwa ugu caansan waxay ahaayeen dukaankii hore ee B. Altman (1905) ee 34th Street iyo Fifth Avenue, Bankers Trust Company Building (1912) at 14 Wall Street iyo JP Morgan Building (1913) oo ku baahsan waddo.
Sanadkii 1905, St. Regis wuxuu ahaa huteelka ugu dheer New York, wuxuuna taagnaa 19 dabaq. Qiimaha qolku wuxuu ahaa $ 5.00 maalintii. Markii huteelka la furay, saxaafaddu waxay ku tilmaamtay St. Regis inay tahay "hoteelka ugu hodanka badan oo ugu hodansan adduunka."
Dhismaha waxaa ku baxay lacag ka badan $ 5.5 milyan oo doollar, waana lacag aan la maqlin xilligaas. Astor wax kharash ah kuma reebin alaabtii: sagxadaha marmaryada iyo dariiqyada laga soo qoday caen, alaabtii Louis XV ee Faransiiska, Waterford crystal chandeliers, qasabadaha qadiimiga ah iyo roogagga bariga, maktabad ay ka buuxaan 3,000 oo maqaar ku xidhan, buugaag dahab ah. Wuxuu qol walba ku rakibay laba albaab oo naxaas ah oo guban oo naxaas ah, alwaax dhif ah, meel dabka ka samaysan oo marmar ah, saqafyada qurxinta iyo taleefan, taas oo ahayd wax aan caadi ahayn waqtigaas.
Markii St. Regis Hotel la furay sanadkii 1905, Maareeyaha Guud Rudolf M. Haan wuxuu soo saaray buug xayaysiis adag oo ka kooban 48 bog oo leh 44 sawir oo sawir iyo tiraab xambaarsan:
Hotelka St. Regis
“Qoraalka hoteelka St. Regis waxaa lagama maarmaan ah in la xusuusto in aan la macaamilayno nooc hudheel caadi ah, laakiin xallinta mushkilad bulsho oo nagu khasabtay xaaladaha maanta jira. Wakhtigu wuxuu ahaa markii hoteelku ka dhiganyahay hoy kaliya oo socotada ah; maalmahaas, si kastaba ha ahaatee, waa inay sidoo kale la xisaabtantaa dadka leh guryo wanaagsan, kuwaas oo inta badan u arka inay ku habboon tahay inay xiraan guryahooda toddobaad ama dhowr bilood; dadka fikirka ah in lagu siiyo raaxada guriga, adeeg wanaagsan iyo cunnada, iyo jawiga dhadhanka iyo turxaan -bixintu weligeed dhib bay ahayd. In si gaar ah loogu adeego dabaqaddan Ameerika si macquul ah, iyada oo aan la iloobin martida habeenka ama usbuuca keliya, ama xitaa kuwa ugu casrisan, waxay ahayd fikradda Mr. Haan, madaxweynaha iyo ruuxa haga shirkadda. Ansixinta Col. John Jacob Astor iyo iskaashiga xirfadeed ee naqshadeeyayaasha, Messers. Trowbridge & Livingston, St. Regis ee Wadada Konton iyo Shanaad iyo Fifth Avenue waxay u taagan tahay taallo…
St. Regis waxay dabooshaa goob dhan 20,000 oo cagood oo laba jibbaaran, hadda waa huteelka ugu dheer New York. Meesha ay ku taal ayaa si fiican loo doortay, waayo, iyadoo ku taal bartamaha qaybta ugu wanaagsan ee deggenaanshaha ee New York, waddada moodada ah ee magaalada iyo afar baloog oo ka mid ah Bartamaha Beerta, si fudud ayaa looga heli karaa dhammaan jihooyinka, iyo inta badan dukaammada ugu fiican magaalada , iyo sidoo kale goobaha madadaalada, waxay ku jiraan masaafo socod oo fudud. Kuwa doorbida baabuur -wadidda, adeeg gaadiid oo hufan ayaa diyaar u ah habeen iyo maalin…
Waaxda nadaafadda iyo badbaadada ayaa sidoo kale leh laba astaamood, kuwaas oo St. Regis markii ugu horraysay si xad-dhaaf ah looga faa'iidaysto- habaynta hawo saafi ah iyo daadinta boorka iyo qashinka. Waxaa la rakibay nidaam hawo qasab ah oo ay weheliso shucaac aan toos ahayn kaas oo dhismaha oo dhan siinaya saaf, hawo nadiif ah, diirran ama qabow sida cimiladu u baahan karto… ..
Qol kasta oo afar ama shan dabaq ah ayaa la siiyay oo hawada sare ay soo gasho, waxaa lagu sifeeyaa miirayaasha maro-jiiska, waxaa lagu diiriyaa iyadoo la marinayo xargaha uumiga, ka dibna waxaa lagu wareejiyaa matoor koronto iyada oo loo marayo marinnada qolalka kala duwan. Meelaha laga soo saaro qolalka waxaa lagu qariyaa guntimaha aan qarsoonayn ee darbiyada ama shaqada naxaasta qurxinta leh oo qayb weyn ka leh qurxinta. Qofka martida ahi wuxuu ku habayn karaa heerkulka qolkiisa isagoo adeegsanaya heerkulbeeg otomaatig ah. Wareeg joogto ah oo hawo ah ayaa lagu hayaa dhismaha oo dhan, habeen iyo maalin: ma jiraan wax qabyo ah, qabow jawi cabsi leh; dhab ahaantii qofka martida ahi uma baahna inuu furo daaqadiisa si loo siiyo hawo saafi ah oo aad u badan. Nidaamkani waa horumar weyn marka loo eego gulufyadii waagii hore kuwaas oo buuq badan oo fool xun oo xoogaa aan la hubin inta kulaylka la siiyay. Hawada nijaasta ah waxaa si hufan u daaya taageerayaasha qiiqa. ”
Dib-u-soo-noqoshada guriga oo dhan ayaa la aqoonsaday laguna sharxay buugga St. Regis Hotel: